Rajesh Koirala » 2018 » July
गाउँतिरको यो पत्रकारिता, कहाँसम्म पुग्ला हजुर ?
अमेरिका बस्ने र यहाँ पत्रकारिता गर्ने रहर यता भित्रिने जोकोही पत्रकारलाई जाग्दो होला । मलाई पनि त्यस्तै भयो । अंग्रेजीमा त्यति दक्ष नहुँदा अमेरिकामा पत्रकारिता संभव होला र ? भन्ने शुरूको अनुमान पछि मत्थर हुँदै गयो । किनभने केही संभव भयो । केही गर्न सकियो । सबैको आशिर्वाद, माया, हौसला मिले अझ थप नयाँ केही गर्न सकिएला भन्ने आशा छ ।
नेपालीपन बचाउन सकिएला ?
चेतनाको स्तरको कुरा हो । नेपालमा हामी जातभातका कुरा गर्छौं । यसका विपरित विकसित देशहरू आफ्नो मुलुकलाई बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक आदि बनाउने विचारमा लागिरहन्छन् । बहुभाषा, बहुसंस्कृतिको कुरा अब यस्तै विकसित देशमा संभव हुने त भए जस्तो लाग्छ ।
त्यसैले हामी नेपालीमूलका मानिस यहाँ अटाउन सकेका हौंला । हाम्रो पनि कला, संस्कृति, परम्परा, भाषा आदि संरक्षण गर्न अमेरिकामा संभव हुन सक्छ जस्तो लाग्या छ । जर्मनकी चान्सलर एन्जेला मार्कलले जर्मनी बहुसांस्कृतिक मुलुक हुन नसकेका बताएकी छन् । बहुसांस्कृतिक मुलुक बन्न अमेरिका सफल हुन सक्छ, उनको अनुमान छ । यस्ता धेरै अवयव जीवित रहने सक्ने अमेरिकामा नेपाली–भाषाको पत्रकारिता संभव छ, यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ मात्र पनि हुनसक्छ । Read More »
अगस्त, २०१३ मा यसै विषयमा बीबीसी नेपाली सेवाका लागि भगिरथ योगीले एउटा रिपोर्ट तयार पार्नुभयो । अमेरिकामा मैले जे देखेको थिएँ, सुनाएँ । सुनाए जति प्रसारण हुने कुरा भएन । मेरो खोजको बाँकी अंश रोचक छ । एकपटक त्यो चहारौं । Read More »